I entsha yeminyaka isibe uhlobo zithuthukisa ukuvela izinkanyezi ezintsha e Olympus esigabeni sezwe. Young, abanamakhono, amahle okudala ukuze ifohle ameva izinkanyezi ngokusebenzisa imincintiswano ehlukahlukene kanye abakhiqizi ngazinye yephrojekthi. Hhayi okuhlukile kanye Refleks iqembu.
"Ufuna ukwenza konke kahle, wenze konke ngokwami," - Alla Pugacheva kuyinto yokuvalelisa bonke abantu abanamakhono nabanentshisekelo, ngubani dream ukuba singangeni ngenkani platform yasekhaya. Wenze njalo iqembu umdali "Reflex" Vyacheslav Tyurin. Hlangana, umqambi, umkhiqizi, umqondisi kanye umuntu unekhono - Mr Tyurin, ongowokuzalwa e Novosibirsk. Edolobheni lakubo wahlangana muse yakhe futhi Irina Evseenko, soloist Jazz Band, eyaziwa kangcono ababukeli njengoba Nelson.
Lo mbhangqwana kangangokuthi wanquma ukuba anqobe dolobha, futhi eTurin wadala nge "Diana" Irina solo yakhe phrojekthi. Kodwa ngo-1998, ngumculi sasivumela ethandwa wanyamalala izikrini TV. Ezinyangeni ezingu-12 we abalandeli futhi kungenzeka ukucabanga lo muntu wesifazane omuhle futhi umculi abanamakhono. Irina waba soloist leqembu elisha.
abantu abathathu - ngakho kuhlelwe Vyacheslav Tyurin Iqembu "Reflex". Old, noma kunalokho iqembu lokuqala lalinabashumayeli abesifazane ababili kanye dancer wesilisa, umculi Irina kwaba Nelson.
Vyacheslav Tyurin hhayi kuphela ukukhiqiza phrojekthi: yena zakhe esezinesikhathi eside zimkhonza umqambi, umculo isiqophi umqondisi kanye filmmaker.
Ingxenye yokuqala ye "Reflex"
Ngo-1999, ku-emkhathizwe likhuphuka Showbiz Russian Okunye esasikwenza imisebenzi eminingi, kodwa hhayi wonke wakwazi ukunqoba uthando izilaleli. Ukwehluka - iqembu "Reflex". Ukwakheka iqembu laziwa: i soloist kwaba yangaphambili solo umculi UDiana yena Irina Nelson, emuva-vocal wayala umculi osemusha Olga Kosheleva futhi lasetshenziswa wokudansa Denis Davidovskaya. Ibhande eyathatha kancane kuka iminyaka emibili.
Ngo-2002, umkhiqizi enquma ngokuphelele ukushintsha iqembu format. Ithimba usimema Alain Torganova DJ Silver. I soloist eyinhloko ubuso bomkhiqizo kanye ingxenye-umkhiqizi unkosikazi Irina Nelson.
I yimpumelelo kakhulu iqembu
Njengoba ezothatha isikhundla iningi abasebenzi, Tyurin akalilahlile. ubuso okusha kwangeniswa drive iqembu elikhethekile. Ngo Torganova ubuso "Reflex" kwaba umculi sibuthakathaka kodwa Umhleli womdanso enhle. Isici sangaphandle esadlala indima ebalulekile: sexy, blonde ezimbili yabasubathi kungemuva ebukekayo Grigoriya Rozova sibahle kakhulu. Akumangalisi ukuthi lokhu trio iqembu adumile "Reflex". Ukwakheka - Irina Nelson, u-Alain Torganova, Grigoriy Rozov (Isiliva) - uye abe intandokazi ezigidi, hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi phesheya.
Ngokusho poll eziningi wedolobha izincwadi kanye nemvume iqembu Reflex wathatha indawo yesithathu phakathi kwamaqembu engcono eRussia kule nkulungwane entsha yeminyaka. Ithimba hits ngokuphindaphindiwe izindondo ehlonishwayo futhi aphethwe amasonto amaningana phezulu amashadi.
C izingoma ezifana "Ukudansa", "yiya mad", "Mhla ngiqala ngqa", "Uthando", "ingaboniswa" Ayimi "futhi kwamanye amaningi ethulwa abafana bayihamba Russia, emazweni CIS naseYurophu.
Esikhathini abasebenzi piggy bank, ezifana umklomelo "ukubakhona kwe lalithimba", "Stopudoviy hit", "Ibhomu Yonyaka", "Golden Gramophone". Ngo-2006, uNelson kanye eTurin baye yaklonyeliswa Order of Ephakeme KaHulumeni ye Russian Federation futhi indondo "Ukuze bomsebenzi kanye ibhizinisi idumela."
Ngo-2007, u-Irina Nelson watimisela kuya e nohambo lwasolwandle uwedwa. Kusukela ngaleso sikhathi iqembu "Reflex", ogama Ukwakheka alushintshi, aqala ukuphelelwa kwayo iminyaka emihlanu. Kuye ebhaliwe hits eziningi, wathwebula ezinye omfisha, kodwa inkazimulo yangaphambili yanyamalala.
Tyurin banquma ukwenza band eziyengayo nakakhulu. Esikhundleni DJ Isiliva eqenjini ngemuva auditions eziningi bafika amantombazane amabili. Akubuzwa, kwathi ingxenye egqamile kakhulu iqembu "Reflex". Amagama abantu abasha kusukela ngo-2007 - zhenya Malahova no-Anastasia Studenkina. Nobuhle Malakhov avela ngisho ne-Nelson, kodwa ngo-2007-ke ekugcineni washintsha ngo vocalist okuthunyelwe eyinhloko.
Ngo-2009, Nastia Studenkina wanquma abuqede career ukucula azinikele umndeni. Eqenjini kuthiwa lathathelwa indawo Elena Maximova, kodwa ngemva kweminyaka emibili yena, futhi, liye watimisela kuya e nohambo lwasolwandle uwedwa. intombazane entsha ebonakala ngo-2011 e iqembu - Anna Baston, kodwa uchungechunge kusukwe kusukela "kuveza" ayizange yaphela.
Ngo-2012 endaweni yalo endala emuva trio inkanyezi Irene Nelson. Iqembu "Reflex", eyakhiwa eminyakeni emihlanu 2007-2012 liye lashintshwa izikhathi eziningana, waphinde waba ubuso bayo ubudala, ukunciphisa inani labamba iqhaza abantu ababili. Irene Nelson futhi u-Alyona Torganova babesendlini futhi sithokozise izethameli kunabaculi evusa inkanuko futhi hits ubudala.
Ngo-2015, band pop uye wamemezela ukukhululwa kwe-albhamu yabo entsha "big intombazane." Ekwindla ka-umkhiqizi samemezela ukukhululwa sokugcina izingoma okwase kuyisikhathi eside elindelwe.
zethimba udumo namuhla akuyona njengoba enkulu njengoba kwakunjalo 2002-2007., futhi noma kunjalo abesifazane bayaqhubeka bezobuka futhi avele njalo nesembozo omagazini. Namuhla, ngenxa studio albhamu ayisishiyagalolunye duo, futhi umkhiqizi yabo ongumakad 'ebona, njalo olusha repertoire zezingoma ezintsha. Mhlawumbe hits elisha lizotholakala maduze.
Indlela yokuhlanza ikhompyutha yakho ukwandisa ijubane emsebenzini wakhe?
Harem - kuyini? Umlando namasiko aseMpumalanga
Werber. Izincwadi ukuze - indlela ukufunda?